Rega Malware Kamwe Uye Nokusingaperi Nokutevera Mazano Akajeka Nenzira Yakanaka Inogadziriswa neSemalt
Zvinyorwa zvisingabhadhari zvinogona kukonzera kurasikirwa kwakawanda nekukuvadza. Munyika yebhizimisi, vatengesi vanoedza mazano akawanda ekuba mari, sirivha dzekutengeserana uye chero ruzivo runogona kuvabatsira. Zvigadziriswa zvishandiso zvakadai semapuraneti antivirus, firewalls, uye kuvhara ma email kunobatsira zvikuru mukuchengetedza malware kutorwa.
Ivan Konovalov, the Semalt Mutengi Wakabudirira Mutevedzeri, anoti pane nzira dzevashandi vanogona kutenderera zviyero izvi - dedicated servers cheap. Vanowanzotaridzira vashandi kuti vawane nzira yehurongwa hwemasangano. Nenzira yakanaka, kana nhengo dzevashandi dzichiita zviito zvinotevera, dzichaderedza kushungurudzika kwavo kurwisa zvirwere zvinonyanya kukosha.
Zvekare dzepap-up uye zviziviso zvewebhuku ichokwadi chehupenyu munyika inowanikwa. Vatengesi vakaisa mari yakawanda munguva idzi mbiri. Nyeredzi dzavo uye zvirevo zvinowanzoratidzwa nechisimba uye mashoko anonyengera. Zvinotengeswa zvinotengeswa zvinotarisa zvakanaka. Popups anowanzoyevera nezvechikanganiso chinodikanwa nekukurumidza uye chinoita kuti vashandi vadzivirire matanho ekugadzirisa.
Aya matanho uye mapikicha anovanza zvikwangwani kune zvinyorwa zvitsva uye masayiti. Kamwe kana unoshandiswa nemushandisi pazvibatanidza zvakadai, iyo malware inogona kutengesa auto. Northeastern University's Office of Information Security inopa zano kuti vashandi vanofanira kudzivisa mahwindo akadaro echinyorwa uye bedzi kungodonha pahutano hwakanaka.
Maererano neWakeUseOf, vashandi vanofanira kurega kuregera kana kuzarura mazano ayo mavambo uye zvakakosha hazvina chokwadi..Kunyange zvazvo mazhinji e-mail maunoshanda achaongorora zvinyorwa zvemaware, vashandi vanogona kuvandudza kuchengetedzwa kuburikidza nekudzivisa zvisungo zvisingakumbirwi uye zvisungo.
3. Shandisa kunze zvigadziridzo zvigadzirwa
Zvino uye zvadaro mafaira anogona kutorwa kubva kune imwe kombiyuta kuenda kune imwe achishandisa zvishandiso zvakasiyana-siyana kubva pa USB flash drives, makadhi ememori, kunze kwekutyaira uye mamwe madivayiri. Izvi zvigadzirwa zvekuchengetedza zvinowanzogoverwa uye zvinogona kutakura malware kubva kune imwe kombiyuta kune imwe. Usati wasvinura mafaira, chengetedza maitiro ekuchengetedza kuti uone malware sezvakaita MakeUseOf.
Vanhu vanogara vachikohwa nezvinhu zvisingabhadhari. Mitambo yakasununguka, software, mimhanzi, uye mafirimu ndizvo zvinonyanya kushandiswa nevashandi vachishandisa kudyara malware mumakombiyuta akawanda. Nzvimbo dzakawanda dzepaIndaneti dzinopa zvinyorwa zvisingabhadharwi zvinokonzerwa kuti dzisave malware mu system. Northeastern University's Office of Information Security inokurudzira kuti dzikwanise kubva kune dzimwe nzvimbo dzakatendwa kuti dzipedze dambudziko iri.
maEmail emafishingi anoshandiswa kubvisa mamwe mashoko kubva kumubatsiri achishandisa maitiro akasiyana-siyana. Vanyori veemaimeri aya vanogona kutamba mutambo wevarwere kuti vakundire kuvimba kana kushandisa shanje sezvamakunda lottery kukurudzira vashandi kuti vatsanure mashoko akaita svondo rekwereti chekwereti. Nzira dzavo dzinopesana mukugadzirisa uye nzira.
Vashandi vanofanirwa kuchengeta maimeri kubva kune vasina kutumirwa. Kune emaimeri ayo nhengo dzevashandi vanoverenga, dzinofanirwa kutarisa mashoko pamusoro pekunge mutumidzi ave akatengesa.